टन्टलापुर घाममा ५० केजीको भारी बोक्दा बोक्दै बिसाएर निदाएका यी बालक, पूरा पढ्नुहोस उनको हृदय’विदारक जीवन ! – Nepal Online Khabar
टन्टलापुर घाममा ५० केजीको भारी बोक्दा बोक्दै बिसाएर निदाएका यी बालक, पूरा पढ्नुहोस उनको हृदय’विदारक जीवन !
October 14, 2020 94
ताप्लेजुङ : यसो सोच्नुहोस् त । टन्टलापुर घाममा ५० केजीको भारी बोकेर उकालो बाटो हिड्दा कस्तो होला रु हामी मध्ये धेरैले यो दुख भोगेका पनि होलौ । आफ्नो बाल्यकाल सम्झनुस् भदौको घाममा उकालो बाटोमा गह्रौं भारी बकेर तप तप पसिना चुहाएको ।
कति गाह्रो हुन्छ त्यो भोगेकोलाई थाहा हुन्छ । त्यस्ते अहिले एक १२र१३ बर्षको उमेरमा स्कुल जाने, साथी भाईसँग खेल्ने, घर आउने होमवर्क गर्ने, सामान्य काममा बाबुआमालाई सघाउने यसरी नै दिनचर्या वित्छ यी उमेरका नानी बाबुको ।
यी तस्विरमा देखिएका बालकको भाग्य त्यस्तो पढ्न, खेल्न, रमाउने भाग्य छैन। यी बालकको पनि मन होला पढ्न, खेल्न, रमाउन । तर यी बालक ५० केजीको भारी बिसाएर टन्टलापुर घाममा निदाएका छन् ।
ताप्लेजुङ स्थित कञ्चनजंघा वेसक्याप जाने बाटो ९तापेथोक० नजिकै यी मस्त निदाइरहेका छन् ।यी बालक नीलो भेष्ट, कालो हाफ पाइन्ट, नीला चप्पल ढुंगाको कापमा गुडुल्की परेर निदाएका छन् ।
उनको नजिक ५० केजी जति कोदाको भारी छ । उनको हात खुट्टामा घाउनै घाउ छ भने उनी पहिरो खसिरहने ठाँउमा निदाएका छन् । यो तस्विर पत्रकार तथा कवि प्रकाश ढंगानाले खिचेका हुन् । उनले त्यो बालकलाई उठाएर केही सोधेनन् ।
केवल ती बालकलाई हेरे, तस्विर खिचे, मन अमिलो बनाए अनि हिँडे । त्यही कारणको उनको नाम, घर र उनी कहाँ जान लागेका हुन् थाहा छैन ।हाम्रो देशमा वालश्रम मुक्त घोषणा गरिए पनि यस्ता धेरै बालक छन् । बालश्रमको नारा जति नै उछालिए पनि कार्यान्वयन नहुदा फितलो भइरहेको छ ।
Prevकल्पना दाहालको आमा बिरामी भइ अस्पतालमा हुनुहुन्छ उहालाइ छिटै सन्चो होस भनि सबैले भगवान सँग प्रार्थना गरौं ।
Nextआफ्नो साइकलले कि’चेको चल्ला र पैसा बोकेर एक बालक अस्पताल पुगेपछि ! विश्वभर बन्यो भाइरल…हेर्नुहोस् ।
२५ करोड किन ? सियोनाका बाबाले गरे भखरै यस्तो खुलासा…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
प्रचण्ड पक्षलाई गोकुलको प्रश्न – ‘डेरामा बसेकाले घरमुलीलाई हटाउन खोज्ने? किन गरे यस्तो प्रश्न…हेर्नुहोस।
कासी जेट्ली भन्नुहुन्छ : सफल काम गर्दा पनि किन ओली सरकारको आँखामा पर्दैनन कुलमान घिसिङ ?
बालुवाटार जग्गा प्रक’रण : विजय गच्छदारको सबै सम्पत्ति रोक्का…हेर्नुहोस् ।